किन हामी कुकुरहरु चिनी र चकलेट दिनुहुन्न? | कुकुरहरु को विश्व
उमर हाइगेरस | | कुकुर र कुकुरहरूलाई खुवाउँदै
कुकुरहरू हामी भन्दा बढी वा बढी मीठो दाँत लिन सक्छन्। चकलेट वा केकको राम्रो टुक्राको लागि कुकुरको भूखलाई कहिल्यै हल्का नलिनुहोस्, किनकि यो हुनेछ, र ठूलो खुशीको साथ। तर प्रश्न यो हो, के हामी कुकुरहरुलाई चिनी र चकलेट दिन सक्छौं?
उत्तर सरल छ: हैन, हामीले कुकुरलाई चिनी र चकलेट दिनुहुन्न, किनकि यो हानिकारक हो र चकलेटको सन्दर्भमा, विषाक्त। यस लेखमा हामी किन व्याख्या गर्छौं, र कसरी अगाडि बढ्ने यदि तपाईंको कुकुरले गोप्य रूपमा चकलेट बार खाएको छ वा उच्च चिनी सामग्री भएको केहि।
1 चकलेटले कुकुरलाई कसरी असर गर्छ?
2 चिनीले कुकुरलाई कसरी असर गर्छ?
चकलेटले कुकुरलाई कसरी असर गर्छ?
चकलेटमा एक सानो अणु समावेश हुन्छ theobromine, धेरै क्याफिनसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन उच्च मात्रामा, मादक पदार्थ मार्फत जनावरको मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। थियोब्रोमाइन कृत्रिम उत्पादन होइन, प्रकाश संश्लेषणको बेला काकाओ रूखले उत्पन्न गरेको पदार्थमध्ये यो एक हो, यसको चयापचयको लागि आवश्यक छ।
त्यो हाम्रो प्यारो लागि यो विषाक्त छ, तथापि, यो हाम्रोलागि पनि हो भन्ने होइन। हाम्रो शरीरले उस्तै तरीकाले काम गर्दैन। मानवहरू थोरै समयमा थोरै बेरमा थ्रोब्रोमाईन मेटाबोल गर्न सक्षम छन्, जसको शरीर यस अणुलाई द्रुत रूपमा नष्ट गर्न सक्षम छैन। धेरै गम्भीर मामिलाहरूमा, यो अणु कुकुरको शरीरमा 72२ घण्टासम्म रहन सक्छ, त्यसैले यसलाई विषाक्त मानिन्छ।
सानो कुकुरहरू ठूलाहरू भन्दा कम थोरै सहिष्णु छन्। तपाइँलाई एक विचार दिनको लागि, यदि लगभग १२ किलोको कुकुरले, grams०० ग्राम अँध्यारो वा कम शुद्धता चकलेट खान्छ भने, यसले नशाको कारण मुटुको धडकन बढ्ने अनुभव गर्दछ। यद्यपि, २ p० ग्राम उच्च शुद्धता चकलेट पशुको मृत्युको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, जसरी एग्रीफुड स्वास्थ्यका लागि बास्क फाउन्डेसनले भनेका छ (एफएसभीए)। यस तालिकामा तपाई चकलेटको मात्रा देख्न सक्नुहुन्छ जुन प्रकार अनुसार घातक मानिन्छ:
प्रकारबाट चकलेटको लेठ्ठल क्वान्टिटीहरू
प्रत्यक्ष वजन (किलोग्राम)
Choc दूधको साथ (GR।) Choc तीतो (GR।)
113 14 200
14 900 92
जब कुकुरले चकलेट इन्जेस्टेड गरेको छ, विषको पहिलो संकेत त्यो सामान्यतया प्रकट बान्ता र पखाला हो। यदि विषाक्तता अझ गम्भीर बन्न गयो भने, मुटुको धडकन एकदम चाँडो हुन्छ, कुकुर घबराइनेछ, र कम्पो वा दौरा देखा पर्न सक्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा कुकुर कोमामा पसे वा मर्न सक्छ.
यदि तपाइँले देख्नुभयो कि तपाइँको कुकुरले कुनै पनि प्रकारको चकलेट खानु भएको छ, जेसुकै भए पनि, यो विवेकी हुनु र आपतकालीन कोठामा सिधा पशुचिकित्सकले जाँच्नु राम्रो हुन्छ, जो उपयुक्त मानिएमा उसलाई बान्ता गर्ने वा प्रदर्शन गर्ने राम्रो हुन्छ। ग्यास्ट्रिक धुनुहोस्।
चिनीले कुकुरलाई कसरी असर गर्छ?
चिनी संग केहि फरक हुन्छ, तर यसको लागि चिन्ता कतै छैन। चिनी, चकलेटको विपरित, कुकुरलाई विषाक्त हुँदैन, र यो धेरै छोटो र धेरै सानो मात्रामा भएसम्म केहि पनि हुँदैन। समस्या आउँछ जब हामी दुरुपयोग गर्छौं र उनीहरूलाई धेरै चिनी दिन्छौं।
चिनीले उनीहरूलाई धेरै बोसो बनाउँछ, कुकुरलाई छिट्टै मोटोपना बनाउन यो धेरै गाह्रो हुँदैन ठुलो मात्रामा निगमन गरेर, नकारात्मक प्रभावहरूसँग जुन मोटोपना हुन सक्छ, जस्तै ऊर्जाको कमी वा मधुमेह।
अर्कोतर्फ, यो दाँतको लागि घातक छ, हाम्रो लागि जस्तै, तर भिन्नता तिनीहरू प्रत्येक दिन तिनीहरूलाई ब्रश छैन। नतिजा स्वरूप, गुहाहरू विकसित हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको दाँतहरू कमजोर हुँदै जान्छ, पशु चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ।
कुकुरलाई चिनी दिने सिफारिस कुनै पनि परिस्थितिमा गर्न सिफारिश गरिदैन, किनकि यो चकलेट जस्तो विषाक्त छैन, यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ, र vets मा पैसा जुन तपाईं बचत गर्न सक्नुहुनेछसरल रूपमा, उहाँलाई केकको त्यो टुक्रा नदिनुहोस् जुन तपाईंको कुकुरले तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा प्यारो अनुहारको साथ सोधेको थियो। त्यो नबिर्सनुहोस् चिनी हाम्रो लागि पनि खराब छयद्यपि तपाईको शरीर हाम्रो भन्दा धेरै बढी संवेदनशील छ, यसैले थोरै परिमाणमा प्यानक्रियामा गम्भीर प्रभाव निम्त्याउन पर्याप्त छ।
कति पटक तपाईंले सुन्नुभयो कि चिनीले कुकुरहरूलाई अन्धा तुल्याउँछ? यद्यपि यो पूर्ण रूपमा स्वस्थ कुकुरहरूमा सत्य हुँदैन। जहाँसम्म, यदि तपाईको कुकुर मधुमेह रोगी हो र तपाईले चिनी दिनुहुन्छ भने, तपाईंको दृष्टि प्रभावित हुनेछ.
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ: कसरी थाहा पाउने मेरो कुकुरलाई मधुमेह छ
मधुमेहबाट पीडित र चिनी लिने कुकुराहरू बढी जोखिममा छन्। तपाईंको आँखाहरू मोतिबिंदुको कारण सेतो हुनेछन्, तिनीहरू दृष्टिमा हराउनेछन्, सबैभन्दा खराब स्थितिमा, अन्धा हुने। तसर्थ, कुकुरहरुमा मधुमेह र चिनीको मिश्रण डरलाग्दो भन्दा बढी हो। सबै सम्भव भए राम्रो हुन्छ ता कि हाम्रो भोक लाग्ने जनावरहरू उनीहरूको जीवनभर सम्भव भएसम्म स्वस्थ होस्, हैन र?
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर र कुकुरहरूलाई खुवाउँदै » किन कुकुरलाई चिनी र चकलेट नदिनु?
कुकुर ग्रुमर छनौट गर्नका लागि सुझावहरू